बेरोजगार हुनुहुन्छ ? काठमाडौँ महानगरले ल्यायो अवसर - DURBAR TIMES
HomeNewsबेरोजगार हुनुहुन्छ ? काठमाडौँ महानगरले ल्यायो अवसर
काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले बेरोजगारीलाई रोजगारी दिन कार्यविधी जारी गरेको छ ।
पारिश्रमिक कार्यविधि, २०७७ जारी भएसँगै महानगरले कोभिड–१९ का कारण बेरोजगार भएकाहरुलाई रोजगारीका लागि बसोबास गरेको क्षेत्रको वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आग्रह गरेको छ ।
महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै रोजगारी गुमाएका श्रम गर्न सक्ने महानगरवासीलाई जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक कार्यविधि, २०७७ बमोजिम रोजगारी उपलब्ध गराइने जानकारी दिएको हो ।
काठमाडौ महानगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सुचना (जस्ताको तस्तै)
Previous articleनेपाल र बंगलादेशबीचको पहिलो खेल आज हुँदै
Next articleदेउखुरी उपत्यकाको लमहीमा ट्रमा सेन्टर बन्दै